BHG Start Operation Islam | Shwekoyantaw
Published : 9:50 PM Author : shwekoyantaw
ကျွန်တော် BHG ရဲ့ ဆိုက်မှာတင်ထားတာကို ဖေါ်ပြလိုက်တာပါ...။ကျွန်တော်တို့ ရခိုင် မှာဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ
နဲ့ မြန်မာ ကိစ္စ တွေဟာ cyber space ပေါ် ရောက်လာပါပြီ... ။ BHG က cyber war တစ်ခုစတင် ကြေ ညာ
လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်....ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လဲ ဒီကိစ္စ အပေါ်ကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်...။
BHG ရဲ့ ကြေညာချက်ကို အောက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်...။
BHG အနေနဲ့မိမိတို့ အဖွဲ့ ရဲ့ Black Hack သဘောအတိုင်းရပ်တည်ခဲ့တာကြာပါပြီ… မြန်မာ အစိုး ရကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ ဖူးသလို လုံခြုံရေးအားနည်းတဲ့မြန်မာဆိုဒ်တွေကိုလည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးတယ်.. မန်ဘာ တစ်ယောက်ထည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ မဟုတ်တဲ့အတွက် စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့ မန်ဘာ တချို့ကြောင့်လည်း တခြား Online သုံးတဲ့ တခြား ညီအကို တွေ နဲ့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးမယ် စကားအပြောအဆို မတတ်တာကြောင့် ရိုင်းတယ်ထင်ခံရဖူး ထင်ခံရမယ်.. .. BHG အနေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ 1st generation ကနေ 2st generation ထိ ညီအကို အားလုံး က ကိုယ်ပိုင် ခံယူ ချက်ရှိလို့ မိမိတို့ ရပ်တည် ခဲ့တာ မှားတယ် လို့လည်းမဆိုသာကြဘူး မှန်တယ်လည်း မဆိုသာကြဘူး..
BHG ရယ်လို့ စဖြစ်လာထည်းက hacking ပိုင်းမှာ ဘယ်လောက်တော်နေအုန်းတော့ မူဆလင်ဆိုရင် member အဖြစ်လက်မခံ ခဲ့ ဘူး.. ဒီလိုပဲ မူဆလင်တွေကို မုန်းတီးတယ်.. ခု မုန်းတီးတာထက်ဆိုး ၀ါးနေပြီ.
ကျနော်တို့ မြေမှာနေတယ် ကျနော်တို့ ရေကိုသောက်တယ်.. ကျနော်တို့ ပိုင်တဲ့မြေကိုလိုချင်တယ်.. ကျနော်တို့ လူမျိုးကိုစော်ကားတဲ့ ကုလားတွေ ကို ဒီတိုင်းလက်ပိုက် ကြည့်နေရမှာ ကိုလည်း မြန်မာ ပြီပြီ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ လုံးဝမနှစ်မျို ဘူး ..
အဓိက ကျနော်ပြောချင်တာက ..
မူဆလင် ဆိုဒ်တွေကို ဟက်မယ် .. မည်သည့် မူဆလင် ဆိုဒ် မဆို security အရတိုက်ခိုက်မယ် cyber war စတင်ကြေငြာမယ်..
cyber war တစ်ခုဖြစ်လာရင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထည်းအင်အားနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး ..
မြန်မာဘက်က White Hacker တွေကော မိမိတို့ ဘက်ကိုကာကွယ်ဖို့
ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ Black Hacker တွေကော လိုအပ်ပါတယ်..
BHG ရယ်မဟုတ်ဘူး တခြား မှာလည်းကျနော်တို့ ထက် တော်တဲ့ တတ်တဲ့ ညီအကိုတွေရှိတယ်..
BHG ကို မုန်းလား
ဒါမှမဟုတ် အမျိုးဘာသာကိုနင်းခြေနေတဲ့ မူဆလင်တွေကိုမုန်းလား..
ကျနော်တို့ အနေနဲ့ Operation Islam ကို စတင်မှာပါ.. နည်းပညာကိုနားလည်တဲ့ ညီအကိုများအနေနဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် islam ဆိုဒ်တွေကို တိုက်ခိုက်ကြပါ..
ကျနော်တုိ့အဖွဲ့ကို ထောက်ခံ ဖို့ ပြောတာလည်းမဟုတ်သလို ပါဝင်ဖို့ ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး.. စိတ်ဓာတ်တူပြီးခံယူချက်တူတဲ့ လူတိုင်းက ညီအကိုပဲ..
တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်ဒေါင့်တစ်နေရာ က လူမျိုးရေးဘာသာရေးကို မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဘက်က ပါဝင်ပေးမဲ့ ညီအကိုတိုင်းကို လည်း ကျနော် တို့ရင်ထည်းမှာ မျိုးချစ် Cyber သူရဲကောင်းရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားမှာပါ.. ..
WE ,BHG declare cyber war To Islamic site
We, Burmese Hacker are universal but we are loyal to the land we survived, we leant. We don’t want bloodshed created by the terrorists. Also, we do not stand for the evils, we are making peace by our means. If you’re born in Burma, and breathe the breeze of Burmese monsoon, we are the same, of course, we are Burmese. Join our operation.Thanks to everyone..
ref: blink hacker group